Fanamboarana Fanamboarana vy
Fitsaboana ny pneumatic piston rod, tsipika mazava tsara, chrome plated piston rod sy cylinder chrome rod, hard chrome bar: ny fitsaboana ny induction mafy, vonoina ary tempered dia azo omena amin'ny fangatahana.
Honed Tube dia fantatra amin'ny anarana hoe fantsona cylinder hydraulic amin'ny indostria. Honed Tubes, Skived & Roller Burnished Tubes no fitaovana manan-danja indrindra amin'ny famokarana cylinders hydraulic.
PIPE vy tsy misy fangarony mangatsiaka
Cold Drawn Seamless Mechanical Tubing (CDS) dia fantsona vy vita amin'ny mangatsiaka izay manome fandeferana fanamiana, manatsara ny machinability ary mampitombo ny tanjaka sy ny fandeferana raha oharina amin'ny vokatra mafana.
Sodina vy grouting - Punch
TEknolojian'ny fandrefesana sy fandavahana amin'ny fantsona vy tsy misy dikany.
Teknolojia kofehy: Mora ny mampifandray fantsona vy mihoatra ny 2pcs. Drilling teknolojia: Ampiasaina amin'ny solika injeniera, Geological Engineering, Drainage Engineering, sns.
RED ANTICORROSIVE VOLA MIADY AFO MITONDRA AFO MIFANATONDRA.
Tube Seamless Ho an'ny PTO Shaft.
Isika dia iray amin'ireo lehibe indrindra mpanafatra ny Triangular fantsona / voasarimakirana fantsona ampiasaina amin'ny fanamboarana PTO shaft ho an'ny rotavator sns.
Fampidirana vokatra: fantsona voasarimakirana telozoro, fantsona telozoro, fantsona voasarimakirana. ○Mahitsy tsara. ○ Ampiasaina betsaka amin'ny kojakojan'ny milina fambolena, PTO agricultural drive shafts ary saha hafa. ○Masinina fambolena PTO shaft, sodina vy telozoro.
Ny sodina miendrika manokana dia karazana sodina vy tsy misy dikany vita amin'ny sary mangatsiaka. Ny sodina vy seamless miendrika manokana dia ny teny ankapoben'ny sodina vy tsy misy tariby miaraka amin'ny endrika cross-section hafa ankoatra ny sodina boribory.
Galvanized seamless vy sodina dia mafana-dip tafo, ka ny habetsahan'ny fanitso nopetahana dia tena avo, ny eo ho eo ny hatevin'ny fanitso coating dia mihoatra ny 65 microns, ary ny harafesiny fanoherana dia tena hafa noho ny mafana-dip tafo sodina. Ny mpanamboatra sodina galvanized mahazatra dia afaka mampiasa sodina galvanised mangatsiaka ho toy ny fantsona rano sy entona. Ny zinc coating ny mangatsiaka galvanized vy sodina dia electroplated sosona, ary ny zinc sosona dia misaraka amin'ny vy sodina substrate. Ny sosona zinc dia t...
Ny famokarana sy ny famokarana dingana ny rindrina mavesatra seamless sodina vy azo zaraina ho mangatsiatsiaka sary, mangatsiaka mihodinkodina, mafana mihodinkodina sy mafana fanitarana. Ny fitaovana amin'ny sodina vy dia 10, 20, 35 ary 45, izay antsoina hoe sodina vy mahazatra. Araka ny fampiharana, dia azo zaraina ho ara-drafitra seamless vy sodina, seamless vy sodina ho an'ny fitaterana, seamless vy sodina ho an'ny boiler, avo-tsindry seamless vy sodina ho an'ny boiler, avo-tsindry seamless sodina vy ho an'ny simika fert ...
Precision seamless sodina vy dia karazana avo mazava tsara sodina sodina fitaovana aorian'ny mangatsiaka sary na mafana mihodinkodina fitsaboana. Satria tsy misy sosona oxide eo amin'ny rindrin'ny rindrina anatiny sy ivelany amin'ny sodina vy, tsy misy leakage eo ambanin'ny tsindry avo, avo lenta, avo lenta, tsy misy deformation amin'ny fiondrika mangatsiaka
Ampiasaina indrindra amin'ny fanamboarana vy ara-drafitra karbaona avo lenta sy vy ara-drafitra firaka fantsona vy seamless ho an'ny fantsona entona entona misy tsindry ambony sy ambony.
Ny fitsaboana hafanana dia manondro ny fomba fitsaboana hafanana avo roa heny amin'ny famonoana sy ny fandoroana hafanana. Ny tanjony dia ny hahatonga ny workpiece hanana fananana mekanika feno tsara. Tempering mari-pana ambony dia manondro ny tempering amin'ny 500-650 ℃.
Steelpipe vita amin'ny hafanana
Ny fitsaboana hafanana dia manondro ny fomba fitsaboana hafanana avo roa heny amin'ny famonoana sy ny fandoroana hafanana. Ny tanjony dia ny hahatonga ny workpiece hanana fananana mekanika feno tsara.
Hydraulic cylinder seamless sodina vy dia mety amin'ny menaka, hydraulic cylinder, mekanika fanodinana, matevina rindrina fantsona, simika orinasa, herinaratra hery, boiler orinasa, mari-pana ambony, ambany hafanana sy ny harafesiny fanoherana seamless sodina vy, ary mety ho an'ny solika, fiaramanidina.
API dia fanafohezana ny American Petroleum Institute. Izy io dia fikambanana indostrian'ny solika amerikana izay manome angon-drakitra manan-danja isan-kerinandro momba ny fanjifana solika amerikana sy ny haavon'ny fanisana.
Fanodinana fantsona vy
Ny andry pin dia karazana fastener manara-penitra, izay azo amboarina sy mifamatotra amin'ny statika, na afaka mihetsika mifandraika amin'ny ampahany mifandray. Izy io dia ampiasaina indrindra ho an'ny tobin'ny ampahany roa mba hamoronana fifandraisana. Matetika ny pin shaft dia mihidy miaraka amin'ny pin split, izay azo itokisana amin'ny asa sy ea
Sa 179 Seamless Tube, Steel Karbonina tsy misy seam, Hot Rolled Seamless Steel Pipe, St52 Sodina tsy misy tariby, Carbon Seamless Sodina, Pipe hydraulic,